EINz lumay: Sida Loo Helo Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga/Lambarka EIN - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn EINz lumay: Sida Loo Helo Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga/Lambarka EIN
Sawir laga soo qaaday theWealthCircle.com
Ganacsi kasta oo diiwaangashan wuxuu leeyahay waajibaad dastuuri ah inuu bixiyo canshuur. Meherad kasta oo diiwaangashan waxaa loo qoondeeyay Lambarka Aqoonsiga Canshuurta ama waxa aan ugu yeerno Lambarka Aqoonsiga Loo -shaqeeyaha (EIN).
Sababaha qaarkood oo aan la sharrixi karin ayaa qaarkood iloobaan ama si khaldan u diraan EIN -kooda oo ah dhibaato aad u weyn maadaama ay u baahan doonaan inta ay samaynayaan qaar ka mid ah dokumentiyada ganacsiga.
Tusaale ahaan xereynta canshuur celinta, dalbashada amaahda, qaadashada amaahda guryaha, iwm waxay u baahan tahay bixinta EIN waqti uun.
Cusboonaysiintayadu maanta waxay ku xirantahay Sida loo helo Lambarkaaga Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga. Waxaan aaminsanahay inay ka jawaabi doonto su'aalaha aad weydiiso sideen ku heli karaa lambarkayga EIN, sida loo helo lambarkayga EIN iyo waxyaabo kale.
Waxaan sidoo kale eegi doonaa Sida loo xaqiijiyo lambarada EIN, iyo sidoo kale waxa la sameeyo marka aad weydo lambarkaaga EIN.
Waa maxay Lambarka Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga?
Kahor intaanan sii wadin sida loo helo lambarkayga Aqoonsiga Canshuurta aan kuu sheegno lambarka Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga.
Lambarka Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga ama EIN sida aan caadi ahaan ugu yeerno waa Sagaal lambar lambar aqoonsi oo loo adeegsaday aqoonsiga meheradaha diiwaangashan ee IRS.
Waxay ku siinaysaa dherer cayiman oo sharci ah ganacsigaaga. Tirada sidaan hore u sheegnay, waxaa loo adeegsadaa xereynta canshuur celinta, codsiyada amaahda, Deyn -guri, iwm
Ilowsiinta ama aadan haysan meheraddaada EIN waxay ka dhigi kartaa mas'uuliyiinta inay hoos u dhigaan meheraddaada ama ka hor istaagaan mid ka mid ah inuu helo dhiirrigelin ganacsi.
Sida loo Codsado Lambarka EIN
Nuqul ka mid ah EIN-kaaga ayaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo hannaan saddex tallaabo ah oo aan hoos ku sheegi doonno.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan lahayn inaan xusuusino milkiilayaasha meheradda ahmiyadda ay leedahay in la xafido EIN -kooda. Waxay kaa caawin kartaa si dhaqso leh oo habsami leh u socodsiinta ganacsiga ee aagagga kaa doonaya inaad xaqiijiso lambarada EIN si degdeg ah.
Habka ugu horreeya waa inaad wacdo IRS 800-829-4933.
Markaa sii iyaga faahfaahinta meheraddaada.
Sii wad oo ka codso warqad fulineed 147c. Codsiga warqadda waa lacag la'aan.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka dalban kartaa EIN onlayn. Shuruudaha codsiga EIN ee onlaynka ah waxaa ka mid ah Lambarka Aqoonsiga Bixiyeyaasha Cashuurta, aqoonsi Maraykan oo sax ah sida Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti.
Meheraddaadu waa inay ku taallaa Maraykanka ama dhulalkeeda ka hor intaadan bilaabin habkan. Booqasho https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp si aad u bilowdo.
Xusuusnow in nidaamyadu ay kaa xidhayaan 15 daqiiqo oo dhaqdhaqaaq la'aan ah kadib. Tani waxay qayb ka tahay tallaabooyinka amniga ee ay mas'uuliyiintu u dejiyeen hubinta sharci -darrada. Ka digtoonow shabakadaha codsiga EIN ee been abuurka ah.
Sida Loo Helo Lambarka EIN ee Shirkadda
Marka laga reebo EIN -kaaga, waxaad kaloo fiirin kartaa lambarada EIN ee shirkadaha kale. Annaga oo kaashaneyna saaxiibbadayada cilmi -baarista, waxaan awoodnay inaan la nimaadno sida loo helo lambarka Ganacsiga EIN.
Hubinta lambarka meheradda EIN waxay kaa caawin doontaa inaad xaqiijiso sheegashooyinka qaarkood oo aad IRS ka eegto sharci ahaanta meheraddaas.
Intaas waxaa dheer, waxaan helnay weydiimo badan oo dadka wax ka weydiinaya sideen ku helaa lambarka aqoonsiga canshuurta ee shirkadda. Waxay nagu dhiirrigelinayaan inaan u daabacno kuwa weydiisanaya.
Bilowga, waxaad si caadi ah u weydiin kartaa shaqaalaha shirkadda. Laakiin haddii sabab uun aadan u rabin ama aadan u gaari karin shaqaalaha shirkadda waxaad isku dayi kartaa habab kale oo caadi ah.
Filimaanta SEC: Haddii shirkadu si guud u baayacmushtarto, waxaad kaliya eegi kartaa websaydhka Guddiga Beddelka Amniga. Waxaa ku jira faahfaahinta EIN ee shirkadaha liis gareysan.
Xafiiska Amaahda: Dadka intiisa badan baa raadinaya sideen ku helaa lambarka EIN? wuxuu isticmaalaa xafiiska amaahda. Sidaa darteed, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa si aad u hesho shirkado kale Aqoonsiga Canshuurta. Xafiisku wuxuu u oggolaanayaa shakhsiyaadka inay iibsadaan warbixinta amaahda ee shirkadaha kale. Hubi inaad xaqiijiso in warbixinta ay ku jiri doonto EIN ka hor intaadan dalban.
Macluumaadka EIN ee la bixiyay: Iyada oo leh goobo xog ururin oo lacag leh sida https://www.einfinder.com/default.asp waxaad ka heli kartaa shirkado kale lambarada Aqoonsiga Canshuurta.
Macluumaadka kor ku xusan waxaan aaminsanahay inuu faa'iido u leeyahay kuwa raadinaya sida loo helo lambarka Aqoonsiga meheraddayda. Waxay sidoo kale ku imaan kartaa waxtar marka la raadinayo sida loo xaqiijiyo lambarada aqoonsiga canshuurta ganacsiga.
Sida loo joojiyo ama loo beddelo EIN
Haddii aan raadinayo sidii aan ku heli lahaa lambarkayga EIN, waxay sidoo kale noqotaa lama huraan inaan ogaado sida loo baajiyo ama loo beddelo.
Waxaa jira xaalado gaar ah oo IRS laga yaabo inay kaa dalbato inaad baajiso ama hesho EIN cusub.
Haddii aad hadda uun ku biirisay meheraddaada ama aad beddeshay hay'ad ganacsi.
Laga dhaxlay ama laga iibsaday meherad cusub.
Haddii ay dhacdo in meheraddaadu noqoto shirkad kale
Diiwaangelinta keli ahaanshaha ama diiwaangelinta kicitaanka.
Sharciga ganacsiga cusub ee dowladda.
Hawl -gabka, beddelka lahaanshaha, beddelidda qaabka ganacsiga, qorshaha hawlgabka, qaybsiga faa'iidada.
Kuwaas oo dhan iyo qaar kaloo badan ayaa sababi kara baahida isbedelka EIN. Si kastaba ha noqotee, Haddii aad doorato inaad xirto meheraddaada, IRS ma tirtiri doonto Aqoonsigaaga Canshuurta ama ma siin doonto ganacsi kale.
Si kale haddii loo dhigo, weli waad isticmaali kartaa EIN -kii hore haddii aad rabto inaad ganacsigaaga dib u furto. Waxay joojin doonaan EIN -kaaga haddii aad xirto koontadaada IRS oo sida caadiga ah lagu sameeyo warqad qoran.
Tani waxay noqon kartaa sabab la'aan ganacsi ama kala diris. Codso EIN cusub haddii aad damacsan tahay inaad ganacsi kale bilowdo goor dambe.
Sida loo helo Lambarkaaga Aqoonsiga Canshuurta Ganacsiga
Markaan sharraxnay tiro wanaagsan oo ah waxyaabaha laga garan karo EIN, aan kuu oggolaanno inaan ku soo galno sida loo helo lambarkaaga aqoonsiga canshuurta ganacsiga lumay.
EIN waa mid aad u dheer waana sababta oo ah sida caadiga ah lama bixiyo sida lambarada taleefankeena gacanta iyo SSN tiro dad ah oo badanaaba ma xasuustaan. Xitaa haddii ay sidaas sameeyaan, si fudud ayaa loo illoobi karaa.
Si loo fududeeyo, waxaan ku taxnay saddex dariiqo oo lagu helo EIN -kaaga. Waxaan sidaas u yeelnay mid dooranaya habka ugu habboon.
Hubi inaad sugto EIN -kaaga oo kaliya u dhiib kanaalada la xaqiijiyay si looga fogaado in ganacsigaaga wax loo dhimo.
Hoos waxaa ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu heli karo EIN -kaaga.
Warqadda Xaqiijinta EIN:
Waxaad ka heli kartaa lambarkaaga Aqoonsiga Canshuurta adiga oo eegaya warqaddaada xaqiijinta EIN.
Markii aad dhawaan codsatay EIN, warqadda la helay oo qiraysa ansaxinta waxaa ku jira EIN -kaaga.
Waxaad ka hubin kartaa mid kasta oo ka mid ah dhexdhexaadiyayaashii aad codsatay. Dhex mari faylashaada iyo dukumiintiyadaada ama meesha aad ku haysato dukumintigaaga ganacsi ee IRS. Waxaad halkaas ka heli doontaa EIN -kaaga.
Hab kale oo ku habboon ayaa ah raadinta canshuurtii hore. Canshuur celintaadii hore waxaa ku jira faahfaahinta EIN -kaaga.
Haddii aad qabsan karto wax kasta waxaad ku samayn kartaa EIN -kaaga halkaas.
Ogeysiisyada Canshuurta ee IRS:
Ogeysiisyada canshuuraha sidoo kale waxaa ku jira EIN -kaaga. Waxaad raadin kartaa waraaqahaagii hore ee IRS, Fakis, waraaqo, ama dhexdhexaad kasta oo lagugu wargeliyo.
Haddii aad raadinayso sideen ku heli karaa lambarkayga EIN, habsocodkani wuxuu noqon karaa midka ugu habboon.
Ruqsadaha Ganacsiga, Ruqsadaha, iyo Codsiyada kale:
Dukumiintiyada Codsiga Amaahda, feylasha diiwaangelinta meheradda, Ruqsadaha Ganacsiga, dukumiintiyada amaahda ayaa dhammaantood ku leh EIN -kaaga.
Mid kasta oo ka mid ah oo la arko waxaa ku jira faahfaahinta EIN.
Faahfaahinta Xisaabta Bangiga:
Qoraalka xisaabta ee bangiga ama ogeysiisyada kale ee laga helay bangiga sidoo kale waxaa ku jira EIN.
Warbixinnada amaahda meheradda, dukumiintiyada mushahar bixinta iyo kuwa kale ayaa iyaguna waxtar leh marka la raadinayo sida loo helo lambarka Aqoonsiga Canshuurta Aqoonsiga Ganacsigaaga ama EIN.
Hal hab oo fudud oo ka kooban liistada ayaa wicitaan u gudbinaysa IRS si ay kaaga caawiso helitaanka EIN -kaaga.
Si kastaba ha ahaatee, sugitaanka wicitaanka mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid aad u dheer. Khadadka Canshuurta Ganacsiga iyo Khaaska ee IRS waxay furan yihiin Isniinta ilaa Jimcaha.
Wwaa kacdoonkii ugu dambeeyay ee raadinta sida loo helo lambarkayga EIN, sideen ku heli karaa EIN -keyga, sideen ku heli karaa lambarka Aqoonsiga Canshuurta, IWM waxay noqotay lama huraan in la diyaariyo siyaabo lagu xafido EIN -ka meel kasta oo uu joogo.
Baahida deg -degga ah ayaa laga yaabaa inay soo baxdo taas oo laga yaabo inaadan haysan waqti aad ku marto hawsha aan hore u cusboonaysiinay. Isku day intaad awoodo si aad u xifdiso oo ka taxaddar cidda aad kashifayso.
Ma ka heli karaa EIN Online?
Sidaan hore u sheegnay, EIN si sahal ah ayaa looga heli karaa dhexdhexaadiyayaal kala duwan sida filimada SEC, Xafiiska Deynta, keydka macluumaadka EIN, iwm.
Yaa u baahan EIN?
Waxaad u baahan tahay EIN si aad u xaraysato canshuur celin, socodsiiso hanti, ganacsi, shaqaaleysato, sameyso bangi iwm
Goorma ayay tahay inaad codsato EIN:
EIN waa in la sameeyaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa inaad xaraysato canshuur celinta oo aad sidoo kale samaysato kayd ganacsi.
Intee in le'eg ayay ku kacaysaa helitaanka EIN?
Helitaanka EIN -kaaga waa bilaa lacag oo ay bixiso IRS.
Ma ku xaqiijin karaa EIN onlayn?
Waxaad ku xaqiijin kartaa EIN onlayn bogga IRS ama xog -uruurinta kale ee lacag -bixinta.
4 Siyaabood oo Fudud oo lagu Codsanayo Lambarka Aqoonsiga Loo -shaqeeyaha (EIN)
EIN Lookup: Sida Loo Helo Lambarka Aqoonsiga Canshuurta Ganacsigaaga
Daabacaadda 1635 (Rev. 2-2014)-p1635.pdf
Xiriirka Isha Sawirka
Sida Loo Xareysto Shaqo La'aanta Oregon 2021
Sideen Ugu Galaa Koontada Walmart Credit Card Online? | Kaarka Amaahda ee Walmart
Kaarka deynta Walmart wuxuu ku habboon yahay dadka gaaska ka iibsada Walmart oo wax badan qabta…
10-ka Garoon ee ugu Khatarsan Adduunka |2022
Imaanshaha gaadiidka cirka wuxuu ahaa mid wax weyn ka beddelay cayaaraha adduunka. Qiyaastii 60%…
10 -ka Barnaamijyada ugu Wanaagsan ee Ford Sync Si Looga dhigo Madadaalo Baabuur wadista 2022
Horumarinta Ford Sync Apps waa caddaynta in shirkadda Ford ay si joogto ah u horumarinayso oo ay tahay mid cusub.
10ka Ciyaar Ee Dunida Ugu Khatarsan
Isboortigu wuxuu caddeyn karaa inuu yahay waqti madadaalo iyo il madadaalo u ah qof kasta oo ku lug leh…